Ny kinetika fanamafisam-peo fampidirana ho an'ny famonoana vy
Ny kinetika fanamafisam-peo fampidirana ho an'ny famonoana vy miankina amin'ny anton-javatra: 1) izay mitaona ny fiovan'ny elatra elektrika sy andriamby vokatry ny fiakaran'ny maripana (ireo fiovana ireo dia mitarika fiovana amin'ny habetsahan'ny hafanana mitroka amin'ny hakitroky ny sahan'aratra amin'ny alàlan'ny fampidirana ankehitriny) ary, 2) amin'ireo anton-javatra izay tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny hamafin'ny sehatry ny electromagnetic mandritra ny fanamainana (izany hoe ny fiovan'ny ankehitriny ao amin'ny inductor).
Ireo antony ireo dia mifandraika amin'ny fiovan'ny masontsivana ao amin'ny inductors mandritra ny fanafanana vy sy ny
ny mampiavaka ny famolavolana ny fitaovana avo lenta matetika, izany hoe ny fahefana ampiasaina dia fehezina mandritra ny fizotry ny fanafanana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy mijanona maharitra mandritra ny fanafanana ny hamafin'ny sehatry ny electromagnetic an'ny fampidirana, ary misy fiatraikany amin'ny endrika fihodinan'ny mari-pana io fiovana io.
Fanamorana ny induction tamin'ny fitsaboana hafanana ny ampahany amin'ny fiara no nampiasaina voalohany tao amin'ny orinasa. Tamin'ny taona 1937-1938
ny famonoana ny vozona vatan-kazo misy ny motera ZIS-5 dia novolavolaina tao amin'ny orinasa niaraka tamin'ny mpiasa.
an'ny laboratoara VP Vologdin. Ny fitaovana dia napetraka ho ampahany amin'ny tsipika famokarana mitohy, izay
ny ampahany dia niharan'ny fitsaboana mekanika tamin'ny fitaovana mandeha ho azy semi-automatique. Mihoatra ny 61% ny
alt ny ampahany amin'ny motera misy ny fiara ~ ae ZIL-164A sy ZIL-157K dia mihamafy noho ny fanamafisana ataon'ny induction.
Famonoana ny masinina aorian'ny Induction Heating.
Ny fanamafisana induction dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana ny faritra.
Sokajy Technologies Tags induction heating, sehatra fanamafisana induction, fanamainana quenching heater, milina famonoana induction, faritra famonoana induction, rafitra famonoana induction, famonoana olona ambonin'ny tany, famonoana olona ambonin'ny tany, vy famonoana ambonin'ny tany Post Fikarohana